नागरिक सर्वोच्चताको अस्सली ध्वजावाहक मै हुँ । अलि अघिसम्म बिछट्टको बाइसे गठबन्धन गमक्क पर्दै भन्थ्यो । र, नागरिक सर्वोच्चताको अस्सली कार्यकारी पहरेदार मै हुँ । अलि अघिसम्म बाइसेहरूको सरकार जुँगा मुसार्दै कहन्थ्यो । तर, अब दुवैले यसो भन्न छाडे । मानौँ सैन्यबलसामु यी दुवै गरुडको छाया परेको हुचिलजस्तै निस्तेज, निरूपाय र मृतवत् भइसके । दण्डहीनताको पगरीबाट विभूषित हुन लागेका मेजर निरञ्जन बस्नेत र उपरथी तोरणजंगबहादुर सिंहको विजयमुखी यात्रासँगै बाइसे गुरुजीहरू र तिनको सरकारको छद्म आवरणमुनिको यथार्थ अन्तर्य उजागर हुन सुरु भएको छ । र, सैनिक सर्वोच्चतालाई काँध थाप्ने अशोभनीय कसरतसँगै यिनको अस्तित्व सेनाको बफादार अरौटेमा पतीत हुन लागेको दयनीय दृश्यमा बदलिँदो छ ।
जगत् जान्दछ, मेजर निरञ्जन बस्नेतका निधारमा अबोध किशोरी मैना सुनारको जघन्य हत्याको कसुरको दाग लागेको छ । उपरथी तोरणजंगबहादुर सिंहका निधारमा भैरवगणबाट नागरिकहरू बेपत्ता पार्ने बर्बर कृत्यको कलंक टाँसिएको छ । नागरिक अदालतबाट तथ्य-सत्य निरूपण गरी विधिवत् रूपमा यो दाग र यो कलंक सदर वा बदर गरिन बाँकी नै छ । तर, नेपाली सेनाको नेतृत्व भने यी दुई जंगीबन्धुलाई पञ्चखत माफी दिन कठोर हठका साथ कटिबद्ध छ । र, बाइसे गठबन्ध र तिनको सरकार निष्प्राण बुँख्याचाजस्तै ट्वाँ परेर यो कुरूप कृत्य दृश्य हेर्नमा मग्न छन् ।
This entry was posted on December 27, 2009 at 11:36 pm and is filed under बिभिन्न पत्रपत्रीका.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.